Madaxa isboortiga Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale oo ku dhintay qarax
Madaxa isboortiga Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale oo ku dhintay qarax	Last Updated on Wednesday, 04 April 2012 16:11	Wednesday, 04 April 2012 15:54	Qarax ay ku dhinteen 10 qofood ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho. Qaraxa wuxuu ka dhacay theater-kii weynaa ee dhawaan la furay.
Dadka dhintay waxaa ku jiray madaxa isboortiga Soomaaliya Aaden Yabarow Wiish iyo madaxa kubada cagta ee Soomaaliya Saciid Maxamed Nuur. Ra’iisal Wasaaraha Soomaaliya Dr. Cabdiweli Cali ayaa qudbadeynayay waqtiga uu qaraxa dhacay. Ra’iisal Wasaaraha wuu ka badbaaday qaraxa.
Waxaa la tilmaamayaa in ay gabar yar is qarxisay. Dadka dhaawacmay waxaa ku jira Wasiirka Qorsheynta Abdullahi Goodax Barre iyo Dr. Dalxa. Dad kale oo farabadan ayaa ku dhaawacmay qaraxa.
Waxaa loo dabaaldegayay 28 guuradii kasoo wareegatay maalintii la aas aasay Television-ka qaranka. Dabaaldega wuxuu ku bilawday si qurux badan. Waxaa joogay inta badan mas’uuliyiinta xukuumada. Waxaa heesayay hobolada qaranka.
Al Shabaab ayaa sheegatay in ay ka dambeeyeen qaraxa.